Xidho Isboortiga, Jaakada Nabadgelyada, Shaatiyada T, Dharka Fudud - Neming
BSCI shahaado, ku takhasusay Naqshadeynta iyo Soosaarka noocyo kala duwan oo isboorti ah, xirashada dharka xilliga firaaqada ah, xirashada bannaanka ee ku saleysan adeegga loo yaqaan 'bespoke service'. Si aan dharkaaga uga dhigno mid gaar ah, waxaan sameyn karnaa daabacaad kala duwan oo shaashad xariir ah, xardho, sublimation, daabacaadda kala iibsiga kuleylka, xardho iyo inbadan. Dharkeennu waa kuwo tayo sare leh & hanti shaqeyneysa.
Kaliya ma bixinno dharka tayada sare leh, laakiin sidoo kale adeegga macaamiisha oo feejigan. Dhaqankeena ganacsi wuxuu diirada saarayaa: Tayada, Kalsoonida, Adeeg.
Waxaan leenahay shaqaale xirfad leh oo bixiya shaqada ugu fiican.
Warshadeenu waa shahaado BSCI, Coca-cola Audited, oo hirgalinaysa nidaamka maaraynta ISO9001. Dharka waxaa shahaado ka qaatay OEKO-TEX100, Bluesign, oo la jaan qaadaya Global Recycled Standard 4.0.
Dharka wakhtiga firaaqada
Sanad La Aasaasay
Cabbirka Warshadda oo ku jirta mitir laba jibbaaran
Awood bille ah
Marabtaa inaad waxbadan barato?
Waxaan joognaa Waqooyiga Shiinaha, oo leh qiimo jaban oo shaqaale ah waxaanuna u dhownahay Port Tianjin iyo Madaarka Beijing, taas oo noo sahlaysa gaadiid aad u habboon.
Dharka firaaqada guud ahaan waxaa loo qaybin karaa xilliyada firaaqada ah, raaxeysiga isboortiga, raaxada jaceylka, xilliyada firaaqada iyo baashaalka. 1. Dharka caadiga ah ee Avant garde: Dharka caadiga ah ee Avant-garde, oo sidoo kale loo yaqaan dharka caadiga ah ee casriga ah, ayaa ah midka guud ee caanka ...
Waxaa jira noocyo badan oo dhar ah oo loogu talagalay dharka dibedda. Keebaa kugu habboon adiga? Xulashada dharka banaanka, waxaa jira lix shaqooyin muhiim ah. Aynu jaleecno lixda astaamood ee kala ah: Hawo-gelinta hawada Heerka hawo halkii ...